एक किलो सुन पास गराउँदा ५० हजार लिन्थे एसएसपी श्याम खत्री ! – मुलधार न्युज
Home > समाचार > एक किलो सुन पास गराउँदा ५० हजार लिन्थे एसएसपी श्याम खत्री !
१३ जेष्ठ २०७५, आईतवार २१:५७
३८ क्वीन्टल सुन तस्करीमा नेपाल प्रहरीका बहालवाला प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) श्याम खत्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छ ।
यो मुद्दाका मुख्य अभियुक्त चुडामणि उप्रेती गोरेले खत्रीको संलग्नता खुलाएका हुन् । खत्रीसँग सेटिङ मिलाउने भने छिरिङ वालेङ घले भएको उनको बयान छ ।
गोरले मात्र होइन, सुन तस्करीको अभियोगमा पक्राउ परेका अरुले पनि खत्रीलाई पोलेका छन् ।
तर, गोरेले अदालतमै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सेटिङ मिलाउन खत्रीको मूख्य भूमिका रहेको बयान दिएका छन् । फ्लाइ दुबईबाट एक पटकमा १५ देखि २० किलोसम्म सुन आउने गरेको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘दुबईबाट भरियामार्फत झोलामा सुन आउँछ । भरियालाई प्रहरीले पास उपलब्ध गराउथे । सो पछि कुनै चेकजाँच हुँदैनथ्यो । सुन बोक्ने मानिस सहजै प्रहरी हाकिमको कोठामा जान्थ्यो । झोला त्यही छाडिदिन्थे ।’
प्रहरी हाकिम कहाँ छाडिएको सुन प्रहरीले अनुकुल समय मिलाएर बाहिर निकाल्ने गरेको गोरेको बयान छ । उनले भने, ‘दुबईबाट आउने सुन भारतीय ब्यापारीको हुन्थ्यो । सुन सिधै तत्कालीन एसएसपी श्याम खत्रीको कोठामा जान्थ्यो । निजले अनुकल समयमा सुन बाहिर निकाली हाम्रा भरियालाई दिन्थे ।’
गोरेका अनुसार खत्रीले आफ्ना ड्राइभर र अंगरक्षकलाई प्रयोग गरेर सरकारी गाडीमा नै सुन बाहिर ल्याउँथे । ‘श्याम खत्रीले सुन बाहिर निकालेवापत प्रतिकिलो ५० हजार निज आफैंले बुझ्थे’ गोरेले अदालतलाई दिएको बयानमा भनिएको छ, ‘यो लाइनबाट ४०० किलोदेखि ५०० किलोसम्म सुन आएको छ ।’
गोरेको बयानलाई आधार मान्ने हो भने खत्रीले ५०० किलो सुन पास गराउँदा साढे २ करोड बुझेका छन् । छानविन समितिको अनुसन्धानका क्रममा बरामद भएको खातामा पनि खत्रीलाई एक करोड बढी रकम दिएको पाइएको थियो ।
खत्री अहिले फरार छन् । छानविन समितिले बयानका लागि बोलाए पनि अनुपस्थित भई फरार भए ।
उनलाई पक्राउ गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठनमा रेड नोटिस जारी गर्ने तयारी छ । उनी तिनै प्रहरी अधिकारी हुन्, जो यसअघि दुबईबाट आएको ३४ किलो सुन काण्डमा पक्राउ परेका थिए तर, पछि उनलाई अदालतले सफाइ दिएको थियो ।
नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकः वामदेव गौतमको १६ पृष्ठ लामो भिन्नै प्रतिवेदन
प्रहरी चौकी बनाउन स्थानीयवासीद्वारा जग्गा दान
विद्यार्थी पढाउँदै प्रहरी
बंकरमाथि चिया बगान : उदारण बन्यो काभ्रेको कामीडाँडा
बीपी डब्लुलाई तीन विधामा अवार्ड
निर्मला हत्या प्रकरणः निलम्बित एसपी विष्टसहित तीन जनाको डिएनए मिलेन
चीन, पाकिस्तान र श्रीलंकासँग पनि सैन्य अभ्यास
यस्ता छन् सामाजिक सुरक्षा योजनाका फाईदा (पूर्णपाठसहित)
नायिका मिरुना थापा मगर विज्ञापनमा
नेपाल आईडल विरुद्ध मुद्धा दर्ता
राजधानीमा मगर समुदायले उपराष्ट्रपतिलाई लिएर माघे सकराती मनाए
सशस्त्रको बिओपीलाई पूर्वाधार बनाउनमा भीनपाले सहयोग गर्ने
गोरेलाई देखाएर ठूला माछा गायब !
श्रीमती बलात्कार गरेको आरोपमा श्रीमान पक्राउ
सुष्मालाई सेलो गीत गाएर फकाउदै वाइबा !
सरकार विप्लवप्रति कठोर बन्दै, प्रकाण्डपछि नेतृ भुजेल पक्राउ
मेलम्चीको डाडा भित्र सुन भेटियो !
अक्टोबर क्रान्तिको सतबार्षिकी मनाउनलाई विप्लवले काठमाडौंमा र्‍याली निकाले